Kalimada Amiirka Jamaacada Al-Saadicuun Bil-Xaq
Booqdeyaasha Cusub 02 April 2017
Mahad Allaah kaliya ayaa leh.
Naxariis iyo nabadgalyo ha u ahaato Rasuulkeena Muxamed...... Intaas ka dib
Waxaan nahay jamaaco muslimiin ah taas oo caalamka ugu yeeraysa dacwadii ay Nabiyadii Allaah oo dhan ay dadka ugu yeereen, horseedna uu ka ahaa nabigeenna Muxamed (scw). Dacwadaas oo ah: “Caabuda Allaah . Ilaah kale ma lihidiinee”. Addoonnimadaas waa midda ka badbaadinaysa dadku in ay isu dulleeyaan cid aan ahayn Rabbiga caalamka, waana iyada midda siinaysana sharafta iyo karaamada bani’aadamka. Xaqaas oo ka kooban kitaabka Allaah iyo sunnada nabiga (scw), wuxuuna si naxariis iyo dhimrin leh ugu hagayaa dadka dhabbaha kheyrka si waafaqsan manhajka Allaah , mana saarayo dushooda culays aysan qaadin karin.
Cudurkaas dilooday bani’aadamka maanta, jirkoodana ku faafay, wuxuu ka dhashay ka gaabinta ay ka gaabiyeen in addoon ay u noqdaan Allaah kaligiis iyo in ay oggolaadeen in ay isu dhiibaan maamul aan ahayn midka Allaah,Rabbiga caalamka.
Waxaa marag ma doonta ah in haddii bani’aadamku rabaan in jirradaas ka bugsoodaan in ay nolshooda idilkeed ay Allaah u hoggaamiyaan, Allaah kaliyana u jeestaan, kuna toosnaadaan manhajkii Rasuulka Muxamed (scw).
Xaqa ayaan la jecelnahay dadka, waxaana uga tureennaa halaag adduun iyo cirib xumo aakhiro. Xilkaas naga saaran dacwada iyo cabsida aan ka qabno in xaq la qariyo waxay nagu bixinaysaa in aan si bayaan cad ah u sheegno xaqaas,uguna gudbinno iftiinkaas si miyir ah, una gacan qabanno annaga oo aan ka rabin abaalgud iyo mahadcelin midna.
Amiirka Jamaacada Al Saadicuun Bil-Xaq :
Sheekh Mustafa Kaamil Maxamed
Liis Booqdeyaasha Cusub
Halkaan waxaan ugu soo gudbinaynaa umadaha aduunka oo dhan meelkasta ha joogeene “BAAQEENII” koobaad ee aan ku ogaysiinayno in aan annagu nahay jamaaca ka mid ah muslimiinta oo ka murugootay ...
Waa baaqii labaad ee aan dadka ugu caddaynayno caqiidadeena dhabta ah ee aan rumaysannahay iyo dacwadeena dhabta ah waxa ay tahay; si uusan qofna noogu been abuuran ama uusan nooga ...